अन्तराष्ट्रिय Archives - Page5of 28 - Daily State News
‘गुची ग्रेस’ जसका लागि मुगावेले आफ्नो शासन दाउमा राखे
रोबर्ट मुगावे चकित होलान्! जिम्बावेका ९३ वर्षीय राष्ट्रपति मुगावे संसारकै बढी उमेरका राष्ट्रप्रमुख हुन्। झन्डै चार दशकदेखिको उनको अकन्टक शासन यतिबेला धर्मराएको मात्र छैन, सकिने क्रममा छ। त्यसको एउटै कारण हो, पत्नीलाई उत्तराधिकारी बनाउने उनको महत्वाकांक्षा। यही महत्वाकांक्षा चुलिएपछि सत्तारुढ दल जानु–पिएफले सोमबार मुगावेलाई पार्टी नेतृत्वबाट अपदस्थ गर्यो। उनलाई आफ्नो शासन र सुरक्षाप्रति रत्तिभर शंका थिएन। […]
जर्मनीमा गठबन्धन बनाउने वार्ता ‘भङ्ग’
जर्मनीमा खुला बजार पक्षधर उदारवादी दल एफडीपीले अलग हुने निर्णय लिएपछि गठबन्धन सरकार बनाउनेसम्बन्धी वार्ता भङ्ग भएको छ। एफडीपीका नेता क्रिष्टेन लिन्ड्नरले चान्सलर एंगेला मर्केलको अनुदारवादी सीडीयु/सीएसयु गठबन्धन र द ग्रीन्ससँग ‘विश्वासको कुनै आधार’ नभएको बताएका छन्। अब के हुन्छ भन्ने कुरा अस्पष्ट छ तर मर्केलले राष्ट्रपतिलाई भेट्दैछिन् जोसँग समयअगावै चुनाव आह्वान गर्ने अधिकार छ। मर्केलको […]
४ मंसिर, काठमाडौं । जिम्बाब्बेको सत्तारुढ पार्टी जानु पीएफले राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेलाई पार्टीको नेताबाट बर्खास्त गरेको छ । सो पार्टीले मुगाबेलाई राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिन पनि एक दिनको समयसीमा दिएको छ । जानु पीएफ पार्टीले मुगाबेलाई पार्टीको नेताबाट बर्खास्त गर्दै पूर्व उपराष्ट्रपति इमर्सन मन्गावालाई नयाँ नेताको रुपमा नियुक्त गरेको छ ।जिम्बाब्बेमा मुगाबेविरुद्ध प्रदर्शन भएको भोलिपल्ट […]
मुगाबेको भविष्य ‘निर्क्योल गर्ने’ बैठक
जिम्बाब्वेमा आइतवार दुईवटा महत्त्वपूर्ण बैठकहरु बस्न लागेका छन्, जसले राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेको भविष्यबारे निर्क्योल गर्न सक्छन्।अबका केही घण्टामा मुगाबेले गत बुधवार सत्ता हत्याएका सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरुसँग वार्ता गर्नेछन्, जहाँ उनीहरुले मुगाबेलाई राजीनामा दिन आह्वान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सत्तारुढ जानु-पीएफका नेताहरुले मुगाबेलाई पार्टी प्रमुखबाट हटाउने विषयमा पनि छलफल गर्नेछन्। राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै शनिवार जिम्बाब्वेका […]
जिम्बाब्बेमा संवैधानिक समाधान खोज्ने प्रयास
हरारे : जिम्बाब्बेमा सेनाको ‘कू’पछि उत्पन्न राजनीतिक संकट समाधान गर्न दक्षिण अफ्रिकाले पठाएका मन्त्रीले सेनाको नजरबन्दमा रहेका त्यहाँका राष्ट्रपति रबर्ट मुगाबे र सैन्य नेताहरूसँग वार्ता गरी संकट समाधानको गरिरहेका छन्। उनीहरू मुगाबे र सैनिक नेतृत्व दुवै सहमत हुने सम्झौता गर्न प्रयासरत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। सम्झौताले मुगाबे र जिम्बाब्बेको भविष्य तय गर्ने छ। अफ्रिकाको […]
माधव नेपालको ‘भोल्टेज’ घटाउने ‘स्टेबलाइजर’
साझा विवेकशीलका सूर्यराज भन्छन्- हामी ‘स्टेबलाइजर’ हौं ३० कात्तिक, काठमाडौं । आशन्न चुनावमा राजधानीका ‘हेभीवेट’ उम्मेदवारलाई केही नयाँले चुनौती दिँदैछन् । काठमाडौं १ मा प्रकाशमान सिंहलाई विवेकशील साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्रले हाराभारा खेलाउँदैछन् भने क्षेत्र नम्बर २ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई विवेकशील साझाकै डा. सूर्यराज आचार्यले अप्ठ्यारो पार्न थालेका छन् । रविन्द्र मिश्र बाहेक अरु चुनाव […]
सेनाको कदम 'कु जस्तो': अफ्रिकी संघ
अफ्रिकाको प्रमुख क्षेत्रीय संगठन अफ्रिकी संघले जिम्बाब्वेमा सेनाले शक्ति हातमा लिएको र राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेलाई नजरबन्दमा राखेको घटना ‘कु जस्तो देखिएको’ बताएको छ। संघका प्रमुख अल्फा कोन्डेले अफ्रिकी संघले जिम्बाब्वेलाई पुन: संवैधानिक प्रक्रियामा फर्कन माग गरेको छन्। सत्ता हातमा लिएको अस्वीकार गर्दै जिम्बाब्वेको सेनाले राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे सुरक्षित रहेको र उनी वरपर रहेका अपराधीविरुद्ध आफूले कारवाही […]
जिम्बाब्वेः सत्ता हातमा नलिएको सेनाको दाबी
जिम्बाब्वेमा सेनाले सरकारी टेलिभिजनलाई कब्जामा लिंदै देशमा ‘सामाजिक एवं आर्थिक समस्याका लागि जिम्मेवार’ राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेका निकटवर्तीहरुलाई नियन्त्रणमा लिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सैनिक पोशाकमा देखिएका एकजना जर्नेलले टेलिभिजनमार्फत एउटा विज्ञप्ति वाचन गर्दै सेनाले सत्ता हातमा नलिएको उल्लेख गरे। सेनाले ‘कू’ अर्थात् सत्तापलट गरेको जस्तो देखिने घटनाक्रममा राजधानी हरारेमा गोली चलेको र विस्फोटका आवाज सुनिएका थिए। […]
अष्ट्रेलियामा समलिङ्गी बिहेलाई समर्थन
अष्ट्रेलियाले समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने पक्षमा मतदान गरेको छ। हुलाकमार्फत गराइएको एउटा निर्वाचनमा ६१ दशमलव ६ प्रतिशत मतदाता समलिङ्गी विवाहको पक्षमा उभिएका थिए। मतदानमा व्यक्त धारणा कार्यान्वयन गर्न चाहिँ बाध्यकारी हुनेछैन्। चुनावी परिणामपछि अष्ट्रेलियाको सरकारले यसै वर्षको अन्त्यसम्म त्यससम्बन्धी कानून ल्याउने जनाएको छ। आठ हप्ताको चुनावका क्रममा झण्डै ८० प्रतिशत अर्थात् एक करोड २० लाख मतदाताले […]
इराक-इरानको सीमामा शक्तिशाली भूकम्प
उत्तरी इराक र इरानको सीमा क्षेत्रमा ७.३ म्याग्निच्युड मापन गरिएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण दर्जनौं मानिसहरुको मृत्यु भएको छ। पश्चिम इरानमा कम्तीमा ६१ जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। त्यस्तै इराकमा मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको बताइएको छ। इराकको कुर्द शहर हालब्जा नजिकै केन्द्रविन्दु रहेको उक्त भूकम्पको म्याग्निच्युड ७.३ रहेको जनाइएको छ। भूकम्प गएसँगै […]